Dry Foods Manufacturers for USA USA - Bulk Dry Foods Wholesale - Dehydrates Inc
हाम्रो ताजा खेती संरक्षण - 1985 पछि
सामग्रीमा तल स्क्रोल गर्नुहोस्
Dehydrates इंक - थोक सूखे खाद्य आपूर्तिकर्ताहरु र निर्माताहरू
हामी देहाइड्रेट शामिल, 30 वर्ष भन्दा बढीका लागि राम्रो खाना अवयवहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकामा आधारित वितरक।
सबैभन्दा सटीक निर्दिष्टीकरणहरूको साथ अनियमित सामग्रीका लागि तपाईंको घटक खरीद प्रयासहरू यहाँ छन्, यहाँ दक्षता र व्यावसायिकताको साथ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्च-गुणस्तरको सामग्री सामग्री खोज्दै हुनुहुन्छ? देहाइड्रेट समावेशमा, हामी असाधारण गुणको थोक मूल्यहरूमा ठूलो सूखी खाद्य पदार्थ प्रदान गर्दछौं। संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्माताहरूका लागि सुक्खा खाद्य पदार्थको विश्वसनीय वितरकको रूपमा, हामीले उत्तम खानाको सामग्रीको लागि तपाईंको आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं।
Dehydrates इंक पहिलो उत्तरी अमेरिकामा, र अब विश्वभरि, 1985 पछि गुणस्तरको खाने सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ।
यद्यपि प्रारम्भिक थोक निर्जलित वनस्पति क्षेत्रमा विशेषज्ञता, देहाइड्रेट अब यसको उत्पादन लाइन धेरै फल, मसला, जडीबुटी र स्वास्थ्य उत्पादनको विस्तार गर्दछ।
"साझेदार उत्पादकहरूको हाम्रो विश्वव्यापी सञ्जाललाई विश्वव्यापी श्रेणीमा विश्वका प्रमुख खाद्य निर्माताहरूसँग जोड्दै, देहाइड्रेट खाद्य उद्योग को प्रगति मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ "
भरोसेमंद, समयमै र अनुकूल सेवा संग गुणस्तरका उत्पादहरू र प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, ग्राहकहरूको अनुभवको आधारमा हो देहाइड्रेट.
संयुक्त राज्य अमेरीका कम्पनीको गर्व, देहाइड्रेटले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई अमेरिकी कम्पनीको दक्षता प्रदान गर्दछ र समय-परीक्षणको बारेमा थाहा पाउनु, तपाइँको सोर्सिंग अपरेसनहरू संभाल्नका लागि प्रदान गर्दछ। विदेशबाट ठूलो मात्रामा खरिद सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई तपाईंको खरिद परियोजनाहरू चीन, भारत, टर्की, मिश्र र धेरै अन्य किसान देशहरूबाट सुदृढ पार्ने अनुमति दिनुहोस्।
नयाँ उत्पादन सिर्जना गर्न र बजार खोज्दै हुनुहुन्छ? देहाइड्रेटले सोर्सिंग, ट्राभल र मल्ल्यान्डिङ, प्याकेजिङ र लेबलिंग गर्नका लागि आफ्नो निर्माण प्रयासका लागि टर्न-रिज समाधान प्रदान गर्दछ। हाम्रो कोटि भित्रको हाम्रो उत्पादन बुद्धि तपाईँको विधिपेशी इन्जेन्ट्री छनोटहरूमा प्रकाश बसाल्न र प्रत्येक उत्पादनको लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू बुझ्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो सन्तुष्ट ग्राहकहरूले निर्माताहरू, खाना सेवामा दायराहरू र संस्थानहरू, पाल्तुन खाना कम्पनीहरु, स्वास्थ्य खाना र भिटामिन / पूरक कम्पनीहरू समावेश गर्दछ। हाम्रो खाना निर्माण ग्राहकहरूले उद्योगको ग्याम्मेको अवधिमा सूप, सलाद ड्रेसिङ, चटनी, रौसम र मसाले, पास्ता, पनीर, पेय, नाश्ता, खाना खाने, र तुरुन्तै खाना खाने कम्पनीहरू समेत समावेश गर्दछ।
हामी ठूलो व्यापारमा विश्वको गुणस्तर उत्पादनहरू परिचय गर्न तपाईंको व्यवसाय र साझेदारीको स्वागत गर्दछौं।
थोक ओर्गेनिक इन्जिनियरिङहरू
सुरक्षित र विश्वसनीय थोक कार्बनिक अवयवहरू खरीद गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? देहाइड्रेट इंक अब हाम्रो ग्राहकहरु लाई अनौठो गुणको कार्बनिक अवयव प्रदान गर्दछ। हाम्रो उत्पाद विविधता मूल्य निर्धारण अत्यन्त प्रतिस्पर्धी राख्दा विभिन्न ग्राहकहरूको फरक आवश्यकताहरु पूरा गर्दछ। हाम्रो खाद्य पदार्थ र स्वास्थ्य उद्योगको साथ कार्बनिकको मूल्य साझा गर्न हाम्रो बजारमा उत्तम मूल्य निर्धारण गर्न हामी सहयोग गर्दछौँ।
जैविक प्रमाणीकरण, उन्नत प्रकृया र गुणस्तर नियन्त्रण विधिहरू
जैविक अवयवहरूको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न, हामी लगातार हाम्रो उत्पादन रेखा बढ्दै छौँ। हाम्रो जैविक उत्पाद USDA र / या ईयू जैविक CERES, ओरेगन टल्थ र अन्य एजेन्सीहरू द्वारा प्रमाणित छन्। प्रसोधन हाम्रो ग्राहकहरु लाई मूल्य ल्याउन सावधानी र जिम्मेदार तरीका मा गरियो।
एक विश्वसनीय निर्माताबाट रमाईलो जैविक प्रसाद
हामी खाद्य घटक उद्योग को तीन देखि अधिक दशक को लागि धेरै सफलता संग सेवा को लागि सेवा गरिरहेको छ। डिमीड्रेटको प्रतिष्ठाले प्रीमियम गुणस्तर उत्पादनको आपूर्तिकर्ताको रूपमा हाम्रो कार्बनिक प्रसादमा ठूलो साता बढाउँछ। जब तपाईं हाम्रो बाट थोक जैविक अवयवहरू खरिद गर्नुहुँदा भिन्नता अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं गुणस्तर जैविक उत्पादन किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, सम्पर्क देहाइड्रेट इंक
सूखे प्रहार फ्रिज गर्नुहोस्
Dehydrates इंक फ्रिज सुकेको फारममा उपलब्ध दुवै स्टक र विशेष अर्डर वस्तुहरूको विस्तृत लाइन प्रस्ताव गर्नुपर्ने गर्व छ।
नयाँ अनुप्रयोगको लागि सुखाने विधि छनौट गर्ने बेला, प्रत्येक पद्धतिमा के फरक छ र कुन विशिष्ट विशेषताहरू उत्पन्न हुने कुराहरूको मूल्यांकन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। फ्रिज-सुखाने को प्रक्रियालाई बुझ्न र यो कसरी पारंपरिक वायु सुखाने र स्प्रे सुखाने जस्तै डिभिड्रेसन को अन्य तरिकाहरूको तुलना गर्दछ, हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस्। प्रक्रिया पृष्ठ.
हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय फ्रिज सुकेको उत्पादन सधैं हाम्रो एफडी भएको छ मकै , एफडी हरियो बीन्स , र एफडी मटर, तर धेरै अन्य उत्पादनहरू अब एफडी फारममा उपलब्ध छन्। हालैको लोकप्रियताको कारण स्वास्थ्य / सुपरफूड क्षेत्रमा बन्द भएको एफडी जामको हाम्रो विस्तृत प्रस्ताव हो। कृपया हाम्रो हेर्नुहोस् उत्पादन सीमा (PDF) हाम्रो एफडी प्रसाद सहित उत्पादहरूको पूर्ण सूचीको लागि, वा तल एफडी उत्पादनहरूको सूची हेर्नुहोस्।
निम्न वस्तुहरू स्टक फ्री फ्रि भएका वस्तुहरू न्यूनतम नेतृत्व समयको साथ उपलब्ध छन्। केहि देख्नुहुन्न? कृपया सोध्नुहोस् कि हामी तपाईंको कम्पनीको लागि फ्रिज फ्रिज फारममा कुनै अन्य उत्पादन स्रोत वा अनुकूलन उत्पादन गर्न सक्छौं भने हामी तपाईंलाई थाहा पाउन सक्छौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस आज।
लोकप्रिय फ्रिज सुकेको वस्तुहरू
काली मिर्च (बेल)
संचारको प्रकार * नमूना अनुरोधनमूना पाना अनुरोधअर्डरअन्य सन्देशहरू
ब्याजको उत्पादन एप्पलArtichokeयास्पारागसAvocadoबिचBrocoliगोभीगाजरकछुवाअजवाइनChivesCilantroमकैककड़ीडिलफल (विभिन्न)लसुनहरियो बीन्सहरियो प्याजघोडाJalapenoयरूशलेम आर्टिचोकलिङ्कLegumesलेमन पेलदालमशरूमप्याजसुन्तलाको बोक्राPaprikaअजयमटरकाली मिर्च (बेल)आलुकद्दूस्पिनचस्क्वासगुलियो आलुटमाटरसब्जी मिश्रणहरूZucchini
यूएसए कर्पोरेट मुख्यालय
हेल्लेट, NY 11557
टी। 516 295.3700
गर्व WordPress द्वारा संचालित